WDM Sisitimu Vagadziri | China WDM System Fekitori & Vatengesi
100G Transponder / Shanduri
Iyo 100G OTN Transmitter inotsigira imwe QSFP28 mutengi interface uye imwe CFP mutsara-padivi interface kutsigira imwechete-chiteshi 100Gbps hombe-tsanga dhata dhata. Iyo indasitiri yemhando yepamusoro yakabatana tekinoroji uye FEC kumberi kukanganisa kukanganisa coding tekinoroji inogonesa yakakwira-kugona, kureba-kurefu-kuita kwakawanda.
200G Muxponder 2x100G inoshandukira ku200G
SFP + Multi-Rate Quad Transponder 10Gbps Kudzokorora / Shanduri / Transponder
SFP + Multi-Rate Quad Transponder ine 8 SFP + slots, Chigadzirwa chinopa kutapurirana kunochinja kwemaitiro akasiyana, senge 1G / 10G Ethernet, SDH STM16 / STM64, OTU1 / OTU1e / OTU2 / OTU2e, Fiber Channel 1/2/4/8 / 10, CPRI, nezvimwewo. Iyo SFP + transponder inotsigira akawanda-ratidziro mashandiro ane Optical data rates kubva ku1Gbps kusvika ku10Gbps; Iyo yakawanda yakasarudzika yemagetsi ekugadzirisa mhinduro inosanganisira midhiya kutendeuka, chiratidzo kudzokorora, lambda kutendeuka.
Iyo 40G & 100G Muxponer inotsigira 4x10G↔40G kana 4x25G↔100G yemagetsi layer multiplexing / demultiplexing, uye inoshandura iwo anowanza / demultiplexed Optical Signal muDWDM standard wavelength Optical Signal. iyo DWDM MUX / DEMUX, akawanda-chiteshi 100G kana 40G masevhisi anopfuudzwa mune yeDWDM system. 40G & 100G Muxponder ndiyo yakaderera mutengo mhinduro kune 100G metropolitan nzvimbo network DWDM kutapurirana.
40G & 100G OEO Shanduko
40G & 100G Transponder inotsigira maviri 40G kana 100G kuwana sevhisi. Iyo yakawanda yakasarudzika yemagetsi ekugadzirisa mhinduro inosanganisira midhiya kutendeuka, chiratidzo kudzokorora, lambda kutendeuka.
SFP28 Multi-Rate Quad Transponder 125M ~ 32G Kudzokorora / Shanduri / Transponder
SFP28 Multi-Rate Quad Transponder ine 8 SFP28 slots, Chigadzirwa chinopa kutapurirana kunochinja kwemaitiro akasiyana, senge 100M / 1G / 10G / 25G Ethernet, SDH STM1 / STM4 / STM16 / STM64, Fiber Channel 1/2/4/8 / 10/16 / 32Gbps, CPRI, nezvimwe.
Iyo SFP28 transponder inotsigira akawanda-ratidziro mashandiro ane optical data mareti kubva ku1Gbps kusvika ku32Gbps; Iyo yakasarudzika yakawanda yeanowona magadzirirwo mhinduro anosanganisira midhiya kutendeuka, chiratidzo kudzokorora, lambda kutendeuka.
Yakawandisa Multi-Rate Dual Transponder 10 Gbps Kudzokorora / Shanduri / Transponder
Iyi transponder ndeye 10G fiber kune fiber 3R inodzokorora inodzokorora uye transponder. Transponder iyi inotsigira SFP + kune SFP + kana XFP kune XFP fiber kubatana. 1 + 1 otomatiki opera mutsara Kudzivirirwa Kuchinja kunotsigirwa kune iyo Line ports. Iyo transponder iri pachena yakajeka, ichipa 3R (Re-amplification, Re-kuumba uye Re-wachi) pakati pemhando dzakasiyana dzemoduli module.
Bhuruu / Tsvuku EDFA Optical gudzazwi
Imwe Fibre Bidirectional EDFA Amplifier modhi inosanganisira Dzvuku uye chiteshi chebhuruu chakagadzirirwa imwe chete fiber DWDM Solution. Dhizaini yemhando idzi inoshandiswa kune imwechete-fiber DWDM hutachiona masystem.
Pakati pechikamu kuwana EDFA Optical gudzazwi-PA Kadhi
Nekushandisa kwemaitiro emirefu-kure achiwedzera uye kuwanda, kambani yedu yekuzvigadzirira yepakati nhanho yekuwana (MSA) EDFA, yepakati nhanho yekuwana (MSA) EDFA inogona kunyatsogadzirisa kupinza kurasikirwa kunokonzerwa neDCM neOADM, kukanganisa DCM uye OADM mabhendi. Iko kunoguma kwekuisa kurasikirwa kunoderedza kuwedzera kwekuwedzera kwehurongwa OSNR.
EDFA Optical gudzazwi - Booster gudzazwi
EDFA Optical Amplifier module inopa akawanda-mashandiro, yakaderera ruzha, Erbium-Doped Fiber Amplifier (EDFA) mhinduro, Iyo gudzazwi module inogona kuvhiyiwa nguva dzose kuwana (Otomatiki Gain Kudzora AGC), inogara ichiburitsa simba (Otomatiki Simba Kudzora, APC). Yakabatanidzwa VOA inogona kuchinjika otomatiki kuti uwane yakareruka kuwana spectrum. Iyo inogona kukwidziridza iyo C-Band chiratidzo ne kana w / o yepakati danho kuwana (MSA), iyo inounza hukuru hwakachinjika kune iyo network kunyorera.
DCM Kupararira Kwekubhadhara Mudziyo
Huanet Optical muripo unoshanda pamwe nemateru ekupararira muripo weyakajairwa-imwe-mode fiber inogona DCM (G.652) yaive yekupararira uye yekupararira kutsvedza kuripa yakafara bhendi muC-bhendi, ichibvumira iyo sisitimu kukwidziridza zvakasara zvakapararira. Mukupararira kwemubhadharo kukosha kwe1545nm wavelength kupararira kunogona kusvika -2070ps / nm.
Iwo Kupararira kweMubhadharo MaModule ari kuvaka mabhuroko eiyo HUA6000 Optical Yekufambisa Sisitimu uye anoshandira pameso ekukurukurirana node kugadzirisa iyo pulse inopararira chiitiko chinozivikanwa seChromatic Dispersion iyo inoderedza yakanyanya kufambiswa kwedaro re data muiyo fiber fiber.
Sfp C ++, Optical Fiber Module, Huawei Olt Mutengo, Huawei Qsfp +, External Modulation Transmitter, Xfp Transceiver,